इतिहास सुरु गरौँ। द्वितीय विश्व युद्ध को समयमा संबद्ध देश Bretton वुड्स सिस्टम को नाम अन्तर्गत गठन भएको थियो। यो को gist यो थियो: डलर एक वैश्विक मुद्रा बन्न र द्वारा सुन जगेडा छ। सम्म प्रारम्भिक नब्बे, यो अझै आपूर्ति र माग को ब्यालेन्स निर्भर बन्न छैन प्रणाली unbreakable थियो। डलर rises समय देखि। र यो मुख्य हुन जारी गर्दा, निरन्तर बढ्दै छ आरक्षित मुद्रा , संसारको सबैभन्दा बैंकहरू को रूस मा सहित।
किन डलर बढ्दो? डलर लागि मुद्रा बेच्न कम केही देशहरूमा सम्पत्ति (BRIC सहित) मा (र कहिलेकाहीं पनि उन्मूलन) नेतृत्व। यो स्वतः डलर लागि माग बढ्छ। अर्को उत्प्रेरणा - यसको आफ्नै बन्धन को अमेरिकी खजाना द्वारा बिक्री को लागि। अमेरिकी अर्थव्यवस्था अरूको लागि एक मोडेल रूपमा, संसारमा सबै भन्दा ठूलो हुन जारी छ।
अमेरिकी समाज सायद सबैभन्दा adventurous छ। यो सुविधाले तपाईंलाई चाँडै संकट देखि निस्कनु गर्न अनुमति दिन्छ। र यो यो गुण डलर किन बढ्दो छ जो अमेरिकी मुद्रा, शक्ति मा लगानीकर्ताले 'विश्वास मा प्रेरित जारी छ। निस्सन्देह, तिनीहरू afloat कुनै पनि अवस्थामा, अर्थव्यवस्था बलियो लगानीकर्ताले विश्व-विस्तृत को आँखा आकर्षित पाउन। र यो तथ्य सबै अवस्थामा स्थिरता बारेमा कुरा गर्न सम्भव बनाउँछ छ।
अगाडि जानुहोस्। सामान को उपयुक्त राशि र जो यी उत्पादनहरु खरिद गर्न सकिन्छ पैसा को मात्रा को व्यवस्था, केहि परिमार्जन गरियो। अब उहाँले सेट विनिमय दर द्वारा repelled छ। तर पाठ्यक्रम विनिमय द्वारा निर्धारण चिनिएको छ।
यो कि अमेरिकी संकट bypassed छैन जस्तो देखिन्छ। यहाँ पनि, यो दिवाला, बेरोजगारी र बजेट घाटा उल्लेख गरे। तर यो विशेष गरी डलर संकट को दावी शिखर थियो। विरोधाभास? सुदूर यसलाई देखि। वृद्धि दर को कारण बुझ्न गरेर, हामी डलर बढ्दै किन छ को मौलिक प्रश्नको जवाफ हुनेछ।
यी अवस्थामा भने अमेरिकी अर्थव्यवस्था , बस exorbitant डलर हुनेछ बढ्न जारी राखे। त्यहाँ अन्य सबै देशहरूमा अर्थव्यवस्था मा गिरावट छ, गिरने तेल मूल्यहरु: तर अन्य कारक तोड को भूमिका खेल्छन्।
तर मुद्रा को मूल्य वृद्धि जारी छ। किन? लगानीकर्ताले तेल को गिरने मूल्य चासो हराएको छ, डलर मा सरेका छन्। डलर, सारा संसार द्वारा मान्यता प्राप्त एक वस्तु, रूप, बस किनभने यसको कम लागत यस अवधिमा थप आकर्षक भएको छ। यो डलर बढ्दै छ किन प्रश्न, तर यूरो जन्म देती? यसलाई सरल छ: यूरो - राम्रो जवान मुद्रा, तर डलर ट्रम्प कार्ड मा - उमेर पुरानो भरोसा र पहिचान, त्यसैले पनि गिरावट संग, त्यो संसारमा सबैभन्दा बलियो रहनेछ। साथै, विदेशी ऋण को एक लामो सूची अमेरिकी दिवालिया जान अनुमति छैन। सबै लगानीकर्ताले को भोक मा परिवर्तन र, तदनुसार, मुद्रा मूल्यहरु को वृद्धि व्याख्या गर्न संयोजन।
यो प्रक्रिया पनि रुबल-डलर उदाहरणको रूपमा छलफल गर्न सकिन्छ। माथि गत 2012 अनौठो को रुबल केन्द्रीय बैंक जारी थप गिरावट, लगभग 18% गिरा प्रतिरोध गर्दा। डलर बढ्दो छ किन, को रुबल पतन, र कहिल्यै मा सबै यो प्रक्रिया बन्द हुनेछ? किन केन्द्रीय बैंक राष्ट्रिय मुद्रा को पतन indifferent हो - रुबल?
धेरै आर्थिक विशेषज्ञहरु युरोपेली ऋण संकट र तेल को लागि कम मांग गर्न दर्शाउन। तर यो सत्य को मात्र सानो अंश छ। रूसी अर्थव्यवस्था को आधार - निर्यात। यो क्षेत्र को स्थिरता कार्य №1, सिद्धान्त मा, हुनुपर्छ। तर केवल हात मा निर्यातकहरु हुन्छ कि सबै कुरा, अधिक यति ठूलो भाग पहिले नै निर्यात राजस्व पाएको विदेश छ। र यो वास्तवमा यो सम्भव (वा बढी पनि) मा अतिरिक्त 18-20% वित्तीय सुरक्षाको तकिया गठन गर्ने बनाउँछ।
एकै समयमा, र वित्तीय सट्टेबाजों, यो सजिलो पैसा द्वारा मोहित ब्याज दर मा खेल मा द्वारा punishable छन्। "पूंजी उडान" धेरै चर्चा छ, वास्तवमा विदेशी डलर ऋण को आकर्षण छ। र हुनत उनि आफ्नै अफशोर कम्पनीहरु आंशिक psevdokreditami छन्, तिनीहरूले व्यापक निभाउँछ। ऋण को दबाब, सरकार रुबल मा एक अनियन्त्रित आक्रमण जोगिन गर्न राज्य रिजर्व को नै मात्रा विदेश राख्न भएको थियो। यसरी एक सम्भव बाहिर ल्याउन, निजी मुद्रा, ऋण आंशिक untied हातमा पश्चिमी निवेश स्वामित्व आवश्यकतालाई हटाइ को उन्मूलन आफ्नै राज्य कोष प्रहार। र यो छ - एक डबल फाइदा: प्रति डलर सीबी मा rubles ठूलो छ, र राज्य रिजर्व पहिले नै पश्चिम को वित्तीय प्रणालीको सम्भावित पतन संगत गर्न सक्दैन। तसर्थ, रूपमा stolidly को जुवा डलर खरिदका लागि केन्द्रीय बैंक देख, को छुटकारा रही "विदेशी रङलगाएकोकागज।" तर, एक 30,76 रुबल संग सजिलै प्रति डलर 40 "जम्प", जोखिम-takers खुसी भएको सकेन।
अब ग्लोबल मात्रा फर्कन गरौं। पहिलो स्थानमा नै ध्यान ड्र? सबै बजार को आन्दोलनहरु को पूर्ण समन्वय। संग डलर को वृद्धि यूरो, बन्धन, तेल, सुन पर्छ। र कारण - सतह मा: अमेरिकी मुद्रा बाहिर भाग्यो। निस्सन्देह, तपाईंले तिनीहरूलाई मुद्रण गर्न सक्छन्, तर राम्रो लागि संयुक्त राज्य अमेरिका लागि स्थिति परिवर्तन गर्दैन: विदेश बाट जलसेक पुनर्वित्त आवश्यकता, केही अन्य बाह्य ऋण प्रतिस्थापन गर्न मात्र तरिका हो। अमेरिकी बैंकहरू - - युरोपेली बैंकहरू - अमेरिकी बजेट त्यहाँ अमेरिकी फेडरल रिजर्व काम गर्न स्पष्ट सिस्टम हुनुपर्छ। युरोपेली बैंकहरू मुक्त पैसा आफ्नो मिसिन प्रविष्ट गर्न ढिलो भएको केही कारण लागि रहने छैन, र युरोपेली केन्द्रीय बैंक, मुद्दा सन्तुलनमा सक्षम। अमेरिकी सबै बजार र देशका लिक्विडिटी खर्च नगरेर, डलर को एक अनियन्त्रित पतन रोक्न प्रयास सबै रोक्दछ बाहिर मिलाउ रहनेछ। यो डलर बढ्दै किन छ को प्रश्न अर्को जवाफ छ।
यो तपाईं चलान गर्दा सम्भव छ मुद्रण प्रेस को ECB को स्थिति स्थिर। हामी प्रतीक्षा छौँ ...
प्रक्रिया प्रवाह रेखाचित्र कन्फेक्सनरी: विवरण
बीमा लगानी कम्पनी - छ ... लगानी र निर्माण कम्पनी
विश्व प्रश्न 'किन?'
"Asparkam": आवेदन र दबाइ को विवरण
किन panty liners प्रयोग गर्ने?
म नङ लागि प्राइमर प्रयोग गर्नुपर्छ?
IPhone अद्यावधिक पछि सिम कार्ड देख्न गर्छ: कारणहरू
महान् चोरी स्वतः वी पीसी मा सिस्टम आवश्यकताहरु। सिफारिस र न्यूनतम सिस्टम GTA5PC मा आवश्यकताहरु